Ọrụ, Ọrụ, Nlegharị | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Nchịkọta: Ọrụ, Ọrụ, Ntị
Mgbe ị na-azụ mmanụ, otu esi achọpụta mmanụ mmanụ sịntetik ma ọ bụ ọkara na ebe na otú e si egosi ya
Mgbe ị na-azụ mmanụ, otu esi achọpụta mmanụ mmanụ ma ọ bụ ihe nkiri sịntetị ebe na otú e si egosi ya gaa na ebe nrụọrụ weebụ nke onye na-emepụta ihe, dịka ọmụmaatụ, mobileNUMX ma kọwaa akara njirimara.
Enweghị ihe kpatara ya, ihe mkpuchi ihe mkpuchi na mkpọtụ StarLine A61 na-akpata.
Enweghị ihe kpatara ya, ihe mkpuchi ihu mkpuchi na ntụrụndụ StarLine A61 na-akpata mgbe ntinye aka na-amalite, oghere mkpuchi na ọkụ igodo nso na ihe nkedo nke dị na labroot ka e gosipụtara ihe ị ga-eme? ọ bụ maa bụghị ...
Oti mkpu Starline !!!
Oti mkpu Starline !!! E nwere ihe dị otú ahụ na Starline A9, bọtịnụ mbụ na keychain bụ ihe omume, ọ ga-abụrịrị na furu efu. Gbalịa mee ihe odide ala site na ntụziaka. Ebumnuche nke 1 bọtịnụ na isi keychain na-agbanwe ma ị nwere ike ịgbanwe onwe gị ...
Kedu ụlọ ọrụ iji tinye xenon?
Kedu ụlọ ọrụ iji tinye xenon? H ị plette ọbụna xenon kasị dị ọnụ ala na-enwu ihe nlekota karịa onye ọ bụla halogen na tupu ị dee na ị ghaghị ịnwale ya n'onwe gị. Ezi xenon na Osram, Narva, General Electric, ...
Ọ ga-ekwe omume ịwụ mmanụ mmanụ na bọmbụ 4-stroke ?? Ọ bụrụ na ọ dịghị ihe kpatara ya?
Ọ ga-ekwe omume ịwụ mmanụ mmanụ na bọmbụ 4-stroke ?? Ọ bụrụ na ọ dịghị ihe kpatara ya? Ee e nyocha otu ugboro. Ọ dị arọ karị, ọbụnakwa na-anụ ya ka ọ na-abanye n'ime mgbe engine na-agba ọsọ. Enwere m ...
carb kxnumx. esi edozi kodNUMX
carb kxnumx. Kedu ka esi edozi k36 na-arụ ọrụ nke ọma ka m cheta na ọ bụ ụlọ ọrụ ochie nke nwere ụlọ dị iche iche, nke dị n'etiti 36x na ọgba tum tum? Na-agbanwezi carburetor K-80 ngbanwe a na-eme dị ka ndị a ...
VAZ 2106 dị iche iche. Mgbanwe ndị dị aṅaa ma ọ bụrụ na ọdịiche dị iche iche? kedu ihe ga-aka mma na nke ka njọ?
VAZ 2106 dị iche iche. Mgbanwe ndị dị aṅaa ma ọ bụrụ na ọdịiche dị iche iche? kedu ihe ga-aka mma na nke ka njọ? Ugbua wiil ahụ ga-agbanye mgbe nile n'otu ụzọ ahụ (igbochi) na a ga-enwe ihe ọ bụla na-atụgharị ụgbọ ala n'onwe ya ...
Kedu otu esi mepee hood na 2107 a? USB wepụpụtara na nnukwu ụlọ ahụ! Ọnọdụ ahụ aghọwo ihe mgbagwoju anya karị!
Kedu otu esi mepee hood na 2107 a? USB wepụpụtara na nnukwu ụlọ ahụ! Ọnọdụ ahụ aghọwo ihe mgbagwoju anya karị! Igwe a kpochapụrụ nke ọma bụ nnọọ mgbanwe, ị nwere ike iweli n'akụkụ onye ọkwọ ụgbọala ma ruo uwe elu nke USB kpamkpam (amaara m, ...
ma nyocha ma ma ọ bụ ma ọ bụ ma ọ bụ ma ọ bụ ma ọ bụ na ọ bụghị mkpu na koodu mmekọrịta. ndị na-edeba akwụkwọ. ma ọ bụrụ otú ahụ, gwa m njikọ nke isiokwu ahụ
ma nyocha ma ma ọ bụ ma ọ bụ ma ọ bụ ma ọ bụ ma ọ bụ na ọ bụghị mkpu na koodu mmekọrịta. ndị na-edeba akwụkwọ. ma ọ bụrụ otú ahụ, kwuo njikọ maka isiokwu ahụ. Nke a bụ: Ha na-etinye nnyonye anya. Onye nwe igwe na-eti bọtịnụ ahụ. Ọ dịghị ihe ọ bụla. Na koodu nabatara ...
otu esi agba akwa scooter na-eme ya n'onwe gị
otu esi eji aka pụrụ ịsacha ihe osise ochie (ọkacha mma) ma ọ bụrụ na ịsachaghị ya, jiri nwayọ wepu skins ahụ na mmiri (site na mmiri ụfọdụ, na-achịkwa elu “ka ọ pụta ìhè”) Ihe mbụ eji elu ya nwere primer…
Kedu ka ụlọ nchekwa coal na-esi dị iche site na nke mbụ? Ọ dị mma nchịkwa? Enweghị m ike ikwere ya ...
kedu ka esi esi ahọpụta carbon dị iche na nke mbụ 'ihe nzacha nke ọma' Enweghị m ike ikwenye ya ... Dị ka ha na-ekwu ebe a - na-eguzo n'okporo ụzọ, ma eleghị anya, ikpo unyi ga-adịkwu mma. “Ọ ga-agbaji ruo mgbe ị na-egbochi itinye ikuku…”
Ònye tinyere igwe eletrik na ụgbọ ala ahụ? ọ ka mma ma ọ bụ na-enweghị ya?
Anie ekesịn afia otop ke moto? ọ ka mma ma ọ bụ na-enweghị ya? rzhu))))))))))))))))) echegbula onwe gị - ị ga - agbake ... ihe niile na - aga ... ọ bụ ihe ọhụrụ na motọ))) turbine ahụ nọ n'ụdị onye nkuzi processor ...
Kedu ihe bụ ọdịiche dị n'etiti nzagide ntangọ na nchara nchara mgbe niile?
Kedu ihe dị iche n'etiti nzacha odo na-egbochi ihe na ihe ikuku ikuku. Mana ndị ọkachamara nke etiti mgbanye “Bilkon” enweghị ihe ha ga-eme… Ekwenyere na ọ bụrụ na iwepu ihe nzacha na ụlọ ya na niile, ikike moto ...
kedu ihe na-adịghị n'ime ụgbọ ala?
Kedu ihe bụ ụgbọala n'ime ụgbọ ala? Anam akowa na udiri oyibo nke ga-afọdụ naanị ya - Ka wiil ahụ wee ghara ijide asphalt ahụ nke ọma, ụgbọ ala anaghị adọkpụ ma ghara ịgbaze ...
otua esi egbu ndi mmadu n'ime ugbo ala zuuru. onye ahịa na echere ụgbọ ala ugbu a
otua esi egbu ndi mmadu n'ime ugbo ala zuuru. onye ahịa a na-echere wiilọnụ, nke a abaghị uru ..) dịka ọ na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ndị mmadụ nwere ike ime ya maka ego. a zuru ụgbọala ahụ, na ...
Kedu ka CATALYST si emetụta mmanụ oriri ??
Kedu ka CATALYST si emetụta mmanụ oriri ?? oriri na-abawanye n'ihi eziokwu ahụ bụ na ahụike dị njọ ịkwadebe ngwakọta karịa ọgaranya. N'ihi ya, mmụba na ike, ma ọ bụghị n'ihi mbenata nke nkwụsịtụ hydraulic ahụ. Ọ bụ ...
Kedu ihe mkpọchi SHIFT n'aka ekpe nke steering steering pụtara? Gịnị ka ọ bụ maka ya?
Kedu ihe bọtịnụ SHIFT mkpọchi aka ekpe nke sterịlị pụtara? Gịnị ka ọ bụ maka ya? akwụkwọ ntuziaka na-ekwu na enwere ike igbochi nnyefe akpaka na-akpaghị aka, wee jiri akara a pịa igodo ahụ n'ime mgbape ahụ nwere ike inyere aka.
Na-ekpo ikuku oyi site na igwe ọkụ ọkụ DEU Nexia Gịnị bụ ihe mere ???
Na-ekpo ikuku oyi site na igwe ọkụ ọkụ DEU Nexia Gịnị bụ ihe mere ??? Ha na-anakọta ya, na Uzbekistan, ma ọ bụ na Kazakhstan, ma ebe ahụ ọ dị ọkụ, ha adịghị mkpa stovu, ...
Ọ ga - ekwe omume ịgwakọta ihe na - adịghị mma, na engine agaghị esi na ya pụta?
Ọ ga - ekwe omume ịgwakọta ihe na - adịghị mma, na engine agaghị esi na ya pụta? ọ bụrụ na ọ bụ otu ihe, mgbe ahụ i nweghị ike, i nweghị ike! ọ ga-abụ antitosol. Mkpụrụ ahụ ga-agbaze. N'ezie, nke a bụ ...
VAZ - 2114, 1,5 injector, anaghị ebido oyi
VAZ - 2114, 1,5 injector, amaliteghị nke ọma na Spark oyi adịghị ike, echere m. Ihe kpatara ya bụ wires. Enwere ikpe - n'oge a na-ajụ oyi, nkwụsị nke ihe mmetụta crankshaft na-apụ n'anya, na oge mgbanye na injection ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,493.